mampiaraka toerana alemana vehivavy sy ny lehilahy no mitady ny fiarahana, ny namana, ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanambadiana. Mihaona ny olona avy any Alemaina, Aotrisy, na ny Soisa. Fivoriana Tina sy Andreas
‘Izaho dia te-hisaotra anao Tina ny Andreas
Tsy misy andro izay dia tsy manoratra
Ny fampakaram-bady dia efa nomanina.
Misaotra anao be dia be
‘Fa ianao mitady ny mahafinaritra, ny namana, ny firaisana ara-nofo, na ny fanambadiana, matoky izahay fa ho hitanao ny mpiara-miasa tsara ho anao, na miala voly miezaka! Izany dia maimaim-poana mba hisoratra anarana, ka inona no miandry azy? Sonia sy tadiavinao
Mampiaraka tranonkala maimaim-poana →